Thenga Abalandeli abaHluliweyo kwi-Instagram: Iimpawu kunye nokusetyenziswa kweNethiwekhi yeNtanethi Follow ▷️ Abalandeli ▷ ➡️
Thenga abalandeli abahlulele kwi-Instagram: iinkalo kunye nokusebenzisa kwinethiwekhi yoluntu
Disemba 11, 2018 0 IiCententarios 1136
Iinethiwekhi zentlalo (RRSS) ngamaqonga edijithali kunxibelelwano lwehlabathi. Babeka uqhakamshelwano nenani elikhulu labasebenzisi, ngokweRoyal Spanish Academy (RAE). Ngalo lonke ixesha befumana inani elikhulu kakhulu labalandeli kwaye ubukho babo bungayeki ukukhula kwiminyaka yakutshanje. Ngapha koko, zininzi iinethiwekhi ezahlukeneyo zentlalo kwaye eyona ixhaphakileyo kukuba neprofayli ezimbalwa zazo. Phakathi kwezinto ezifanelekileyo kakhulu yi-Instagram. Abasebenzisi abaninzi ngakumbi abajongileyo Thenga abalandeli izahlulo kwi-Instagram Ukonyusa ukuthandwa kwakho.
Ingaphezulu I-85% yabasebenzisi be-Intanethi ukusuka kwi-16 ukuya kwi-65 iminyaka, oko kukuthi, izigidi ze-25,5 zabasebenzisi eSpain bazisebenzisa imihla ngemihla. Ezi ziidatha ezivela "kwisifundo sonyaka senethiwekhi zentlalo 2018" ye-IAB Spain. Kwaye phakathi kwabo yi-Instagram. Abasebenzisi bayo bonyuse i-45% ukusukela kwi-2017 kwaye inamanani amakhulu okutyelelwa kwemihla ngemihla.
Kodwa yintoni kanye kanye i-Instagram? I-Instagram yinethiwekhi yasimahla yezentlalo esekwe ngokuyintloko kumfanekiso. Ikuvumela ukuba uthathe imifanekiso kwaye wabelane ngayo kwinethiwekhi yentlalo ngokwayo. Unokusebenzisa kwakhona ii-hashtags okanye iiegi ezizikhathaza ngentloko. Kunye nakwezinye izinto ezifana Facebook, I-Twitter okanye i-Flickr.
Kwakhona, Inika ukhetho lokutsala okanye ukuguqula le mifanekiso ngokusebenzisa izihluzi, iifreyimu, iziphumo okanye imibala. Zonke iifoto zinesikwere, zifane kakhulu nezo zinokuthathwa ngekhamera ye-Kodak Instamatic kunye nePolaroid.
Umsebenzisi ngamnye unokuphawula umfanekiso ngamnye wabantu abalandelayo kwi-Instagram. Ndiyakwazi yinike like, yabelana ngayo okanye uyigcine. Ngokufanayo, ungathetha nabalandeli ngomyalezo othe ngqo. Ungakhangela abasebenzisi ngokufaka amagama abo kwiinjini yokukhangela. Konke oku kwenza i-Instagram ibe yinethiwekhi enomtsalane. Ngesi sizathu, ngakumbi nangakumbi abasebenzisi bafuna Thenga abalandeli abahlukane kwi-Instagram.
Kule nto kongezwa ithuba lokufaka iividiyo, kunye nokubizwa ngokuba "ngamabali". Imalunga Iividiyo ezimfutshane okanye imifanekiso eneempawu eziphambili kukuba ziyinto ephemeral. Zifumaneka kuphela iiyure ezingama-24 emva koko zinyamalale. Unokongeza imizobo, imiyalezo, izitikha okanye i-emojis kwezi vidiyo kunye neefoto zokuhombisa kwaye ubanike indawo eyahlukileyo.
Ngale nto yokusebenza, injongo kukuba wonke umntu afake iividiyo okanye izifinyezo zento abayenzayo yonke imihla ukuze abalandeli babo babone. Kwaye konke ngaphandle kokuhlala ngonaphakade kwiprofayili ngokwayo. Ukongeza, unokupapasha yonke imixholo oyifunayo nangendlela efunwa ngumntu ngamnye. Apha ubuchule bokubonisa ubungqina obuphambili.
Thenga abalandeli kwi-Instagram
Yintoni elandelwa kwi-Instagram kukufumana abalandeli abaninzi ngangokunokwenzeka. Abantu ababona yonk 'imihla yonke into ekwabelwana ngayo kwaye abanika ukuthandwa kunye nazo zonke izimvo zabo kwiifoto. Inani elikhulu lokuthandwa emfanekisweni lithetha ukuba liphumelele kakhulu phakathi kwabalandeli bomntu oyilayishe yabo Iprofayile ye-Instagram.
Ukongeza, kukho ezinye izicelo ezivumela Thenga abalandeli abahlukane kwi-Instagram nakwezinye iinethiwekhi zokuncokola. Ngale ndlela, ungabonyusa kakhulu abantu abalandela iakhawunti Instagram ikhonkrithi kubhatalwa ixabiso elithile.
1 Iimpawu ze-Instagram
3 Thenga abalandeli kwi-Instagram
Thenga abalandeli abahlulekileyo
Thenga abalandeli be-Instagram eMexico